Myanmar Entrepreneur Group: Risk Taking နဲ့ ကျွန်တော်
အလုပ်လုပ်မှတော့ မြတ်ချင်ကြတာပေါ့။ မြတ်တာမှ မျိုးမျိုးမြတ်မြတ်လေး စားချင်ကြတာကိုး ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ မြတ်ချင်တာတော့ သိတယ် ရှုံးမှာတော့ ကြောက်ကြတယ်လေ။ လူတွေက အလုပ်လုပ်ရင် အရှုံးထက် အမြတ်ကို တွက်လုပ်တာများတယ်။ အဲဒါကြောင့်လဲ စီးပွါးရေးမှာ ဇောက်ထိုးတွေဖြစ်ကုန်ကြတာ။ အမြတ်ကို မတွေးရဘူးလို့ မပြောလိုပါဘူး တွေးရပါတယ်။ ဒါမဲ့ ရှုံးနိုင်တယ်ဆိုတာလဲ တခါတည်းသိထားသင့်တယ်။ အခုပြောချင်တာက Risk Taking ပေါ့ဗျာ။ ဒီမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာထဲက တစ်ခု Entrepreneur တွေအတွက်လဲ အရေးကြီးဆုံး အချက်ထဲမှာ ပါပါတယ်။ Risk Management ကို နားလည်ရင် ခံရရင်တောင် သက်သာတယ်။ အဲဒါတော့ သေချာတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
အလုပ်အားလုံးမှာ Risk ရှိပါတယ်။ မရှိတဲ့ အလုပ်မတွေ့သေးပါဘူး။ ကျွန်တော့်ကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သေချာပေါက်မြတ်မယ် လုံးဝရှုံးစရာ မရှိဘူး လို့ ဆိုလာခဲ့ဖူးတယ်။ ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ် သေချာပေါက်မြတ်တယ် လုံးဝမရှုံးဘူးဆိုရင် မင်းပဲလုပ် ငါမလုပ်တော့ဘူးလို့။ ဟုတ်တယ် ကျွန်တော် အဲဒီလို Profit မျိုးကို စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ ကျွန်တော့်ကို သေချာတယ် မရှုံးဘူးလို့ ပြောလေ ကျွန်တော်ကြောက်လေပါပဲ။ ပြီးတော့ အရင်းနည်းပြီး အမြတ်များတယ်ဆိုတာမျိုး လောင်းကစားဆန်လွန်းတယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒါဆို လုပ်ဖို့ အတော်စဉ်းစားရတော့မယ်။ ရင်းတာက တစ်ကျပ်မြတ်မှာက တစ်ရာဆိုရင် သဘာဝမကျတော့ပါဘူး။ လောင်းကစားမှာတောင် ကျွန်တော်က ၅၀% ဆီ စွန့်စားမှုရှိတဲ့ ဘောလုံးပွဲလိုဟာမျိုးကို ပိုသဘောကျပါတယ်။ ၂ လုံးထီလို ချဲထီလို အဆပေါင်းမြောက်များစွာ ရတာမျိုးကို သဘောမကျပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ချေကလည်း ပိုပြီး နည်းပါးပါတယ်။ သေချာစဉ်းစားကြည့်ပါ။ ပြောရင်း စကားက ချော်ထွက်သွားပြီ ဝါသနာဘက်ရောက်သွားပြန်တယ် အဟက်ဟက်ဟက် :D ။
ကျွန်တော်တို့တွေ Risk တွေကို တတ်နိုင်သလောက် သတိထားသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ခု လုပ်လက်စတချို့ဆိုရင် Risk များပါတယ်။ ဥပမာ Phoewa Portal (www.phoewa.com) လိုမျိုးပေါ့။ ရေရှည်အတွက်သွားရတာပါ ချက်ချင်းထပြီး မဖြစ်ပါဘူး။ လူတွေထဲ အဲဒီ့နာမည် ပြန့်နှံ့ဖို့တောင် အတော်ကြီးကို လုပ်ယူခဲ့ရပါတယ် ဒါတောင် ခုထိ တချို့မသိသေးဘူး။ ငွေပြန်ဝင်ဖို့ဆိုတာ လိုသေးတယ် စောင့်ပေဦးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်မှာ သေချာတဲ့ Plan ကရှိပြီးသားမို့ ဒီ Risk ကို လက်ခံပြီးလုပ်တာပါ။ ဆိုလိုတာက ၁၀၀ ရင်းပြီး ၁၀၀ မြတ်ချင်တာ မဟုတ်ဘူး ၁၀၀ ရင်းပြီး ၁၀ မြတ်ဖို့တောင် အချိန်ကာလကိုပါစောင့်ရပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ Risk ယူတဲ့ အထဲမှာ အချိန်၊ နိုင်ငံရေး၊ ရာသီဥတု၊ လူတန်းစားအလွှာ၊ ပြန့်နှံ့မှုပမာဏတွေကိုပါ ထည့်ပြီးတွက်ရပါတယ်။ အဲလိုမှ မတွက်ရင် အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ လွယ်လွယ်လေးတွေးပြီး ရတယ်ချ မြတ်မယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားလုပ်ငန်းကို ပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ တခုခုတော့ သေသေချာချာ လွဲနေပါပြီ။
နောက်တစ်ခု မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး အရဲမကိုးဖို့ ငါက Entrepreneur ပဲ ဒီလို Risk တော့ ယူရမပေါ့ ဆိုတာမျိုး ဒါကို လက်မခံပါဘူး စွန့်ဦးတီထွင်တာလဲ ဦးနှောက်သုံးရပါတယ်။ ကိုယ့် Customer တွေနဲ့ အဟပ်ကွာနေမယ့် ပစ္စည်းအမျိုးအစား ဥပမာ ခင်ဗျားက ဒီနိုင်ငံမှာ လေယာဉ်ထုတ်ပြီး ရောင်းမယ်ဆိုပါစို့ ဈေးကွက်ကိုကြည့်ပါ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ တနေ့တော့ ဝယ်လာမှာပေါ့ဆိုရင် ဘယ်နှစ်ဦးဝယ်မှာလဲ အဲဒီ့ အချိန်က ဘယ်တော့လဲ ဒီကလူတွေက ဘတ်စ်ကားတောင် အလုအယက်တိုးစီးနေတာ စဉ်းစားလေ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ နောက်တစ်ခုက ကိုယ်က စွန့်ဦးတီထွင်ဆိုတဲ့ နာမည်ရချင်ဇောနဲ့ ပေါက်ကရအတွေးမျိုးတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး ဆိုလိုတာက ကွမ်းယာကို Packing လှလှလေးထုတ်ပြီး ရေခဲစိမ်ပြီးတော့ Super Market မှာရောင်းမယ် (ရေခဲစိမ် ကွမ်းယာတော့ ရှိပါတယ် ကပ်ပြောချင်တဲ့လူ ပြောလို့ရအောင်) ဆိုကြပါစို့ရဲ့ ရှိပြီးသား လုပ်ငန်းပေါ်မှာ ထပ်ပြီး ဆန်းသစ်လိုက်တာလေ ပြောရရင်တော့ စွန့်ဦးတီထွင်ပေါ့ အဲဒါမျိုးက ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ကွမ်းယာစားတဲ့လူက အဲလိုနေရာမှာ ဝယ်တာမြင်ဖူးသလား လမ်းဘေးမှာပဲ ဝယ်စားနေတာလေ ကိုယ်က အဲလိုလုပ်လိုက်တော့ အပိုဖြစ်ပြီး ဈေးကြီးသွားတာပဲ ဖြစ်နေမှာပေါ့ (ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်ရင်တော့ စော်သာစော် :D ဤကားစကားချပ်)။ တွေးသင့်ပါတယ်။ ငါလုပ်တာဈေးကွက်ရော ရှိရဲ့လားဆိုတာပေါ့။ ခုနကပြောခဲ့တဲ့ နှစ်မျိုးလုံးရဲ့ Risk က လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို စုတ်ပြတ်သွားစေနိုင်သလို ခင်ဗျားရဲ့ Entrepreneur စိတ်ဓါတ်ကိုလဲ ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ တချို့ Risk တွေဆိုရင် မယူသင့်ပဲ ယူခဲ့လို့ ဘဝပါ ပျက်သွားတဲ့ အထိတွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါက သေချာ ကြောင်းကျိုးဆက်စပ် မစဉ်းစားခဲ့လို့ ဖြစ်ကြရတာပါ။
ခုနကလို အမြဲတမ်းတွေးကြောက်နေရင်ရော Entrepreneur ဖြစ်ပါအုံးမလား ဟုတ်ကဲ့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တွေးကြောက်နေရမယ်လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး ဆင်ခြင်ပါ ချင့်ချိန်ပါလို့ ဆိုလိုချင်တာပါ။ အလုပ်တစ်ခုမှာ Risk ဆိုတာက ရှိကိုရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့ Risk က ယူသင့်တာလား မယူသင့်ဘူးလား Risk ယူခဲ့ရင်လဲ အဲဒီ့ Risk ကို ဘယ်လိုမျိုး Management လုပ်မှာလဲ ဒါပါထည့်တွေးပါ။ ကျွန်တော်က အလုပ်ကို တအားရမ်းမလုပ်စေချင်တာပါ။ ရမ်းတာနဲ့ စွန့်စားတာက ကွာပါတယ်။ သေချာကွဲပြားအောင် လေ့လာပါ။ ကျွန်တော် အလုပ်စလုပ်တုန်းက ရမ်းပါတယ် ဖြစ်ချင်ဇောများပါတယ်။ risk ကိုနားမလည်ပါဘူး။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးတွေးပါတယ်။ ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး လုပ်ပါတယ်။ ခုတော့ ချင့်ချိန်ပါတယ်။ ဒီ risk က ယူသင့်တဲ့ဟာ ဟုတ်မဟုတ် ပြန်တွေးပါတယ်။ အချိန်အတိုင်းအတာအရ စောင့်ရမယ်ဆိုရင် Stay in Charter stage မှာ ထားပါတယ်။ ကိုယ့်အိုင်ဒီယာကိုတော့ အပျောက်မခံပါဘူး။ ဒီအိုင်ဒီယာက ဒီမှာ အသုံးမဝင်ပေမယ့် နောက်တစ်ခုမှာ ပြန်အသုံးတည့်တတ်တာ လက်တွေ့အရ သိခဲ့ရပါတယ်။
လူတွေက ငွေကိုရင်းဖို့ စဉ်းစားပြီးရင် ကိုယ်ရင်းထားတဲ့ ငွေပမာဏထက်ပိုတဲ့ ငွေကိုပြန်လိုချင်တာပါ။ အဲဒီ့လောဘက အလုံးစုံပျက်စီးရေးကို ဦးတည်စေပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ သေချာစဉ်းစားကြည့်ပါ တချို့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေ ငွေသန်းပေါင်းမြောက်များစွာ ရင်းပြီး နည်းနည်းပဲ မြတ်တာ တွေ့ရပါမယ် သူတို့က သေချာတဲ့ အမြတ်ကိုပဲ ယူတာပါ မျက်စိမှိတ်ပြီး မတန်တဆ မလိုချင်ကြတာများပါတယ်။ တချို့လုပ်ငန်းတွေဆို ၃ ကျပ်တိုးတောင် မကိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လုပ်ကြပါတယ်။ ၃ ကျပ်တိုးတောင် မကိုက်ဘူး မလုပ်ဘူးကွာဆိုပြီး အတိုးပေးစားကြည့်လေ ချီးတဲ့ကောင် ဘတ်ပြေးတော့ ဘာလုပ်မလဲ အကုန်ဆုံးရောမဟုတ်လား။ အဲဒါကြောင့် တချို့တွေဆို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပေမယ့် အမြတ်ရာခိုင်နှုန်းနဲတာပဲ လုပ်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ အဲဒီ့အလုပ်တွေက ခိုင်မာလို့ သူတို့လုပ်ကြတာပါ တွေးစရာကောင်းပြီး ဆင်ခြင်စေ့ချင်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ သေချာစေချင်တာကတော့ ကောင်းမွန်တဲ့ Plan သေချာတဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ စွန့်စားသင့်တဲ့ အတိုင်းအတာ Risk ပါပဲ။ ဒါတွေကို သေချာကိုင်တွယ်နိုင်ပြီဆိုရင် ခင်ဗျားလုပ်ငန်းက အောင်မြင်ဖို့ မဝေးတော့ပါဘူး။ လုပ်ရင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကတော့ အထူးပြောနေစရာ မလိုပါဘူး ထည့်ထားရမှာပါပဲ။ ထပ်ပြီးမှာချင်တာကတော့ Risk ယူတာကို မျက်စိစုံမှိတ်ပြီး အတင်းမလုပ်ဖို့ပါပဲ။ ဒါကို မကိုင်တွယ်နိုင်ရင် လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး ကျွမ်းထိုးမှောက်ခုံ ဖြစ်ကုန်မှာပါ။ နောက်မှ ဆက်ပွါးပါ့မယ် :D
Posted by : zeRoTraSh Posted @ 1:45 PM
စာပေအမျိုးအစား: Article, Experience
စိုးထက် - Soe Htet ! July 26, 2008 at 2:16 PM
ကျွန်တော် ကြားဖူးတာက ၈၀း၂၀ သီအိုရီ ဗျ ... အတွေ့ အကြုံနဲ့ ယှဉ်ရေးပေးတာ ကျေးဇူး ... :)
eitar July 26, 2008 at 5:18 PM
if i am not wrong , Hope for the best .Prepare for the worst in business! thanks for experiences!
My Wonderful Moral Thoughts July 26, 2008 at 8:49 PM
mmepgroup July 27, 2008 at 9:33 AM
အတွေ့ကြုံတွေကို ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါ
အားပေးနေတယ် နောက်လဲ ဆက်လက်ဝေမျှပါဦး
ကိုစွမ်း July 27, 2008 at 4:31 PM
အတွေ့အကြု့လေးတွေ ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါ ကိုဇီးရိုးကြီး